Munamato weKushanda. ? Tsvaga, Tora uye Unodaidzwe
10 Kuverenga Min
Munamato webasa Tinogona kuwana zvibodzwa zvakawanda.
Minamato inzira yemweya inotibatsira kuwana mhinduro kumatambudziko umo isu kazhinji tisingazive chekuita kana maitiro.
Mune uyu mutsara chaiwo watinogona kukumbira pachedu, kuti nzvimbo yekushanda inakidze, kumbira vatenzi vedu kana vari pasi pevamwe uye nezvimwe zvikumbiro zvinoenderana nemamiriro akasiyana angamuka munzvimbo iyoyo.
Chinhu chakakosha kuziva kuti kune nyaya dzevashandi kunewo minamato izvo zvinogona kuitwa zvakananga uye zvakananga, uchigara uchirangarira kuti munamato chiitiko chekutenda icho chinofanira kuitwa nekutenda musimba raanaro.
1 Kunyengeterera basa Rine simba here?
1.1 Munamato wekutsvaga basa
1.2 Munamato wekuropafadza basa
1.3 Munamato wekuwana basa mumazuva matatu
1.4 Kukumbira basa rinokurumidza
1.5 Kuti undidane basa
2 Ini ndinogona kutaura minamato yose here?
Kunyengeterera basa Rine simba here?
Chero munamato une simba. Kune izvi, zvakakwanira kunamatwa nekutenda.
Kana iwe uine kutenda kwakawanda uye kana uchifunga kuti zvinhu zvese zviri kufamba zvakanaka, zvinoshanda.
Tenda muna Mwari Inokura mumasimba ayo. Ipapo chete ndipo pauchapa zvese zvakanaka.
Usatambisa imwe imwe nguva, tanga kunyengetera izvozvi!
Munamato wekutsvaga basa
Jesu, Baba Vekudenga Husingaperi:
Baba vangu, Gwara rangu, iro simba rangu, ndinotaura kwauri Muponesi wangu ...
Iwe une mwanakomana wako pano akatadza, asi ndiani anokuda ...
Unorumbidzwa nerudo rwako, nekuda kwekunaka kwako kusingaperi uye chengetedzo yaunotipa isu, Baba.
Izvo kwauri, zvese zvinogoneka uye zvese zvaunogona nekuti Nyasha dzako dzakakura uye haumbondisiye. Uye panguva dzekutambudzika hauna kumborega ruoko rwangu.
Iwe uri chingwa, iwe hwaive hupenyu, uri rudo uye nyaradzo. Murima mwako unondisesedza. Ini ndinouya kwauri, ndakapfugama, Baba vangu vandinoda, ndinouyazve kuzonamatira runako rwako rwekusingaperi, kuti uwane kuchengetedzwa kwako.
Nekuti ndinoziva kuti paruoko rwako, handingatyi chinhu uye hapana chandinoshayiwa. Nekuti imi, ishe wangu wekunaka, batsirai vakanyanya.
Ndinokukumbira kuti usunungure matambudziko angu, ndinokumbira kuti chikumbiro changu chipindurwe. Sunungura kurwadziwa kwangu uye kuwanda.
Baba, mudiwa wangu Jesu amutswa, tarisai zvandinoda uye ndibatsireiwo kuvatsigira. Ndinokukumbira iwe kuti uve nebasa nyowani, Baba Vangu.
Nekuti ini ndinoziva zvirongwa zvako zvakaringana, nekuti ini ndinonzwa kubatikana. Ini ndinouya kwauri kuzoita chikumbiro changu chebasa. Ini ndinoda basa iri kuti ndiriritire mhuri yangu.
Ndinoziva kuti Iwe mukunaka kwako kukuru, hauzoregi ndichiwira nekuda kweruoko rwako handizotyi uye kuzorora ini ndinzwe. Ndinokukumbirisai baba, chishuwo changu chipiwe nekukurumidza.
Vakaropafadzwa uye baba vekudenga. Ndinoziva uchavhura magonhi nemahwindo etariro. Ndinoziva kuti netsitsi dzenyu huru, muchandiitira basa rakanaka.
Ndibatsirei, ishe wangu, kuti ndishivirire uye ndiwane mubayiro. Muite iye ave neakanaka, rakabudirira uye rakatsiga basa. Ndireverere mukukumbira kwangu kuti ndizvimiririre pamari.
Ndigadzirire Mubairo uye kuropafadza mhuri yangu, chikafu changu.
Ndinokukumbira iwe nebasa iri kana kutanga bhizinesi rangu.
(Chinyararira ita chikumbiro chako chakakosha)
Ndibatsireiwo Ishe pamutoro wangu, ndinokukumbiraiwo, Ishe wangu.
Ndino tenda zvese zviri mauri, Mwari wangu.
Ngavarumbidzwe narinhi, Ishe!
Munamato uyu wekutsvaga basa une simba kwazvo!
Dambudziko revashandi rakapararira mumaguta mazhinji epasi. Zvisinei nekuda kwenyaya iyi chaiyo pane mutsara chaiwo.
Mupfungwa iyi, chinhu chakanyanya kurongeka kubvunza zvakananga uye zvapachokwadi zvatiri kuda kuona, ibasa ripi ratiri kuda kuwana uye kubvunza kuti titende.
Iko hakuna munamato unogadzirwa kubva pamoyo usingazadze mweya yedu nesimba rakaringana uye iro simba rimwe chetero ndizvo zvatichaendesa chero kwatinosvika.
Munamato une simba unogona kuputsa maketani izvo zvisingagoneke kukunda nemasimba edu enyama.
Munamato wekuropafadza basa
Ndinokutendai, Ishe, nekuti ini ndinogona kushanda.
Komborerai basa rangu uye nevangu vandinoshanda navo.
Tipeiwo Nyasha dzekusangana nemi kuburikidza nebasa remazuva ese.
Batsirai kuti tishande vasinganeti zvevamwe. Batsirai kuti tiite basa redu semunamato.
Batsirai isu kuwana pabasa mukana wekuvaka nyika iri nani.
Tenzi, sevanhu vega vanogona kupedza nyota yedu yeruramisiro, tipeiwo inyasha dzekuzvisunungura pazvose zvisina zvazvinobatsira uye tizvininipise.
Ndinokutendai, Ishe, nekuti ini ndinogona kushanda. Usaite kuti mhuri yangu ishaye rutsigiro uye kuti mune yega yega imba pane zvinogara kuti zvirarame nerukudzo.
Minamato inoitirwa chinangwa chekuropafadza hupenyu hwedu kana hupenyu hweavo vakatikomberedza inowanzove iri yekurevesa kukumbira kunogona kuitwa.
Patinokumbira vamwe tinoratidza moyo wakanaka uyo Mwari watakapiwa.
Ndokusaka tichinamata kukomborera basa Haisi munamato wekuzvibatsira isu pachedu asi nekugara zvakanaka kwevaya vese vanogovana nharaunda yekushanda nesu.
Mutsara uyu unogona kubvunza iwo mamiriro ezvinhu umo nzvimbo yekushanda yakatakura nemasimba akashata uye pfungwa dzisina kunaka.
Munamato wekuwana basa mumazuva matatu
Jesu, Jesu wangu akanaka, Jesu wangu anodikanwa, ishe wangu, Mufudzi wangu, Muponesi wangu, Mwari wangu, ndinokunamatai seMwanakomana waBaba Vokusingaperi, ndinovimba nemi uye ndinokurumbidzai netsitsi dzenyu nokunaka, ndinokuremekedzai nekuti munondichengetedza uye ndinemi Ini hapana chandinotya, ndinokuda nekuti unondigezesa nezvikara uye nehunyoro hwedenga nguva dzese dzandinouya nemisodzi yangu pamberi Penyu, nguva dzese dzandinokumbira rubatsiro rwenyu.
Jesu, Jesu wangu akanaka, Jesu wangu anodikanwa, Iwe uri kupenya kweChiedza Chokusingaperi wedzera maoko ako evanobatsira zvakare pamusoro pangu uye uuye kuzondibatsira munhamo yangu; Iwe uri hama uye shamwari yevanoshaya uye usatisiye uri wega kuti tirege kutsauka, Iwe unogara uchigara padivi pedu unondinzwira tsitsi uye undibatsire mumatambudziko angu nekutadza kwangu, ndinzwire tsitsi uye ununure kubva pamatambudziko angu, uye Semurevereri akasarudzika pakati paMwari nevanhu, anopa zvikumbiro zvangu pamberi pake kuti zviongorwe.
Jesu, Jesu wangu akanaka, Jesu wangu anodikanwa, tarisa ichi chinodiwa chikuru chandinacho ikozvino: mukutsvaga kwangu basa ndinozviwana ndakadzika, kunyangwe ndichiedza handiwane uye ndinoda nekukurumidza nekuti izvo zvandinoda zvakawedzera uye zvinopererwa. Ndinokukumbira kuti undipe rubatsiro rwako rwerudo.
Jesu, Jesu wangu akanaka, Jesu wangu anodikanwa, anovhura magonhi ese andinoona akavharika, ndibatsireiwo kuve nebasa rakanaka kana bhizinesi rinondipa kugadzikana kwehupfumi uye rinondipa mukana wekuvandudza nekuenda kumberi, basa rakanaka kana rakabudirira basa kana bhizinesi uko Ini ndinogona kuve nehunyanzvi uye hwega kukura.
Jesu, Jesu wangu akanaka, Jesu wangu anodikanwa, Iwe unozadza mweya nemiviri nemweya wakadzikama, unosunungura kusagadzikana kwandainzwa mukati mangu, rega ndibve panguva ino yakaipa uye usanditendera kunyura zvakadzika uye zvakadzika.
Mune ino nguva yekusava netariro uye yekushomeka inonditungamira mumatanho andinotora, ndiite kuti ndiwane mabasa akanaka anopa, ndivhurire masuo ese uye ndiise vanhu vakatendeseka munzira yangu vanopa rutsigiro rwavo; ndipe huchenjeri kuti ndiratidze kugona kwangu uye kutsungirira uye kusimba kuti ndisakanda mapfumo pasi.
Ndibatsirei kuti ndiwane basa rakanaka pandinookwanisa kuita mabasa angu nekubudirira uye ndiwane mari inodikanwa kwazvo mumba mangu, nditumire Jesu wangu akanaka makomborero ako kuti ndiwane zvandinoda:
(taura nekutenda kukuru izvo zvaunoda kuwana)
Jesu, Jesu wangu akanaka, Jesu wangu anodikanwa, ndinokutendai kubva pasi pekuve wangu nerubatsiro rwese rwamakandipa uye nekuuya kuri kuuya izvo ndine chokwadi kuti hazvizoshayikwe, ndiri zvangu zvese uye ndinoshuva kuve nekusingaperi kudenga , pandinovimba kukuvongai kubvira narinhi uye nekusaparadzanisa nemi zvekare.
Saka ngazvive. Ameni
Wakafarira here munamato kuti uwane basa mumazuva matatu?
Nguva zhinji tinodzidza kuti kune basa rinowanikwa kumwe kwatinoda kushanda asi asi hazvibviri kukwanisa kupinda iro basa.
Muzviitiko izvi hapana chinhu chiri nani kupfuura munamato nekuti iye itsamba yakanaka yekusuma.
Kana uchipinda mubvunzurudzo yebasa isu tinokwanisa kukumbira changamire Mwari musiki wedenga nepasi kuti atipe nyasha dzekuita yakanaka yekutanga ratidziro.
Kune rimwe divi tinofanirwa kugara tichibvunza kuti dzimwe nguva zvatiri kuda hazvisi izvo zvinodiwa naShe uye nepfungwa iyi tinofanirwa kuve neruzivo rwekuita chete izvo zviri kuda kwaMwari.
Ngatifambire mberi kune mumwe mutsara webasa.
Kukumbira basa rinokurumidza
Mwari ndiye muhombe mukuru wepasirese.
Ndinovimba nehukuru hwake uye kuti achandipa iro basa rakanaka raakawana kusvika parizvino.
Basa uko ini ndichafara.
Ini ndichave ndichibudirira, nekuti ini ndichave nemikana yakawanda yekukwira. Basa uko nharaunda yebasa inoshamisa.
Basa uko vatenzi vangu vanotya Mwari uye vanopa nharaunda inodziya uye yakanaka kune vashandi vavo.
Neichi chikonzero, ini ndichagara kwenguva yakareba mune iro basa uye ndinonzwa kufara kushanda uko Mwari ane zvinhu zvakawanda kwandiri, zvinoenderana nezvose. nyika.
Mukutenda, ndichagara ndichifara, ndichigovana nemufaro wese waIshe, ndichinyarara kudzidzisa nekuzvininipisa uye nemuenzaniso wangu, kusimba, kuvimbika, kugadzikana, basa uye kupa zuva rega rega nemufaro wakawanda, wakandinakira. kuitira kuti zvandinoita nerudo, ndezvekubatsira vanhu vazhinji.
Ameni, ndinokutendai Baba kuti mandinzwa uye izvi zvakaitwa
Kusvika kunzvimbo yavasina kana kumbotsvaga vashandi uye kunyorera basa rinogona kunge riri nhanho rinoda hushingi hwepamusoro sezvo paine mukana wakanaka wekuti ticharambwa tisina kana kutaridza hunyanzvi hwedu hwese.
La munamato wekukumbira basa Kukurumidzira kunogona kutibatsira kupasa bvunzo yekutanga yekunyorera basa nekuzvimirira uye kwete nekuti taona kushambadza.
Panguva yekukumbira basa, mumweya rubatsiro runokumbirwa kuti uzive kwekuenda, zvekuti ndiMwari vari kutungamira matanho edu kubva panguva yatinobva pamba uye kudzamara tave kugona kudzokera kwazviri.
Kuti undidane basa
Vanodiwa Baba vekudenga, muZita raJesu, ini ndinotsvaga huchenjeri hwenyu uye ndinovimba naMi kuti munditungamirire kuti nditsvage iro basa rakandinakira.
Ini ndirikutoda kufamba pasi petsitsi dzenyu nechokwadi uye ndisingakotamire kune zvangu zvido uye zvepamusoro kunzwisisa.
Ndibatsirei kuti ndiwane basa rakanaka mukati maro, nemaoko angu, hapana chinhu chinoshayikwa kwandiri kana chero cheangu.
Handizonetseki kana kunetseka pamusoro pechinhu chero chipi zvacho, Baba, nekuti ini ndinonzwa rugare rwako ruchiuya pamusoro pemoyo wangu nepfungwa dzangu.
Ndimi tsime rangu remvura mhenyu, ndine chivimbo nehurombo hwenyu uye kuti munondipa simba kuramba kumusoro uye kuderera kwehupenyu hwangu zuva nezuva.
Ndinokutendai, Baba, nekupa kwandinoita basa maererano nehupfumi hwenyu uye nekubwinya kwaIshe wedu.
Ah Mwari wangu, simba renyu ngave neni nhasi kuti nditsvage basa. Nditungamire kune iro basa iro randichada uye nekukoshesa nemweya wangu wese.
Nditungamire kunzvimbo ine nzvimbo yekuremekedza uye yekudyidzana, munzvimbo yakachengeteka uye inofara.
Ndibatsireiwo kuwana izvo zvendangariro uye zveMweya mune iro basa idzva rawave wakandigadzirira .. Ndatenda Ishe, nekunditeerera uye nekundibatsira nhasi.
Hupenyu hausi nyore nguva dzose, asi ini ndichavavarira kurangarira kuti Iwe unogara uripo kuti undibatsire panguva dzese dzehupenyu hwangu.
Mwari ngaarumbidzwe, rakarumbidzwa zita renyu dzvene Amen.
Panguva iyoyo yatakasiya zvinyorwa zvedu mune imwe kambani, isu tinofanirwa kudzokera kumba tichimirira kuti kufona kuve kwakaitwa munguva pfupi, nekuti muyedzo wedu mukuru pane izvi ndewokumirira tisina tariro.
Patience ndiyo kiyi mune ino yekumirira maitiro.
Nekudaro, isu hatifanirwe kumirira zvachose, ivo vari kukumbira kuti Vaviri vafambise zvidimbu mukuda kwedu kuti yakanaka yekufona yatakamirira inouya nekukurumidza.
Ini ndinogona kutaura minamato yose here?
Iwe unogona kutaura mitsara mina pasina dambudziko.
Chinhu chakakosha kuve nekutenda panguva yekunamatira kubasa. Hapana chimwezve.